Raadin - iSearch
Start Ilmaha & Ilmaha alaabta ciyaaro teendhadii
Markaad fiirsato farcankiisa, waad arki kartaa in kan dambe uu leeyahay malayn badan oo leh malayn badan. Hadday tahay jimicsi, kowboy ama hooy hooyo, dib u noqoshada iyo hoyga ayaa lagu dhex darayaa ciyaarta. Danta danta carruurta way kala duwanaan kartaa. Haddii ilmuhu awoodi karo inuu u ciyaaro teendhada si uu u ciyaaro, sidoo kale wuxuu faa'iido u leeyahay inuu qariyo. Waxyaabaha soo socda, waxaad baran doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato ciyaaro teendhadii waa inuu ogaadaa.
2 Noocyada teendhooyinka
2.1 marwooyin ah teendhadii
2.3 pool Ball teendhadii
2.4 tunnel teendhadii
3 Waxa la tixgelinayo marka aad iibsaneyso
4 Talooyin nadiifinta
5 Wixii da 'kooxeedyada teendhooyinka carruurta waa ku habboon yihiin
6 Warshadaha hoggaamiya
Nidaamkani waa mid sahlan marka loo eego qaybtan hoose. Waxaa muhiim ah in soo saarayaasha in teendhooyinka si fudud loo naqshadeeyo oo si deg-deg ah loo dhisi karo iyada oo ku xiran nooca. Si loo isticmaalo ciyaaraha dibadda, teendhada ciyaarta waa in ay ahaato mid aan biyuhu ahayn oo ka kooban walxaha xasaasiga ah. Marka la eego mustaqbalka dadka yaryar, waxay u maleyneysaa shaqooyin badan. Ma qaadanayso muddo dheer, iyo dhaxalka hanti u lahaanshaha awooddooda yaryar oo aad u faan badan. Haddii ay si lama filaan ah u noqdaan godayaal mana doonayaan inay ka tagaan teendhooyinkooda cusub, markaa waalidiinta iyo awoowayaasha ayaan u baahnayn walwal, tanina waxay u dhigantaa horumarinta dabiiciga ah ee faraca. Waxay u keentaa carruurta inay ku nastaan ​​oo ay iska ilaaliyaan maskaxda. Inta badan, dadka cusub waxay hadda aad u badan yihiin baahida. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in dhalinyaradu ay kaligood dareemaan kaligoodna ay ka bixi karaan isla marka ay waxqabadka iyo cadaadiska ay noqdaan kuwo aad u badan. Haddii ay suurtogal tahay in lagu dhiso qolka ciyaarta qolka carruurta, sidoo kale waa mid aad loo isticmaalo, sida barkinta, bustooyinka, xafaayadaha, ciyaaraha iyo jilbaha boombalaha oo ku dhex yaalla hoyga. Qolka caruurtu waa mid aad u fiican, taas oo ah saameyn dhinaca wanaagsan oo la xidhiidha dhisidda teendhada. Maaha inay si fudud u adeegto sidii herbeachende. Xitaa marka la joogo dhalashada ilmaha ee beerta, waxaa suurtogal ah in la dhiso teendhooyinka noocan ah. Munaasabada noocan oo kale ah, tusaale ahaan, xisbiyada mawduucyada waa la abaabuli karaa. Dhowr princess ama Hindiya ayaa lagu martiqaaday. Sidaas daraadeed teendhada cayaaraha si deg deg ah ayey u socotaa bartamaha. Sababtoo ah in badan oo ka mid ah teendhooyinka si deg-deg ah oo sahal u ah, waxaa sidoo kale lagu talinayaa inay tagaan goobaha hoyga. Waxay kaloo ka ilaalin kartaa qorraxda iyo dabaysha. Waxaa kaloo jira saaxiibo cusub oo xeebta ku yaal.
Haddii aad raadineyso teendho cayaar oo aad u fiican, noocyo badan oo kala duwan ayaa la bixiyaa. Waxyaabaha soo socdaa waa soo koobista qaybaha ugu muhiimsan.
marwooyin ah teendhadii
Gaar ahaan gabdhaha yaryar ee teeramka ciyaarta waa mid aad u badan. Badanaa, teendhada 'princess' ah ayaa lagu qurxiyey maro qurxiyo leh. Waa xusuusin qalbi furan oo leh ubaxyo ama muraayado rinji ah, sida Knorrtoys 55607 ciyaara My Little Princess.
Hindida Hindiya, oo loo yaqaan 'Tenti ama Teepee', waxay la mid tahay Wigwam. Halkan, ciddii heysata ayaa fursad u leh inay ku ciyaaraan Hindida iyo cowboys ama inay daboolaan dabagalka dabka. Teendhaankan caadiga ah, sida taakuleynta MT01gr ee carruurta, way u adkahay qaabkeeda cusub, hase yeeshee way fududahay in gaadiid iyo nadiif la ahaado asalka.
pool Ball teendhadii
Qolka lagu dabbaasho ee kubbadda, waxaad u tegi kartaa hoyga kubadaha, kaas oo aad gacanta ku buuxisid, sida TecTake oo ah teendhada ciyaaraha carruurta ee Pop Up. Kubadaha nalalka ah, kubbadaha caaga ah ee midabka leh ayaa guriga ku keenaya xiisaha daryeelka ilmaha ee xarunta ciyaaraha. Sidaa daraadeed waxaa suurtogal ah in caruurtu ku boodaan teendhada ciyaarta, iyagoo raacaya kubbadda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in qof weyni uu mar walba xannaaneeyo tan, si aysan madadaalo ugu dhicin iyadoo la ooyaysa madadaalada madadaalada.
TecTake Children 's Play Pop Up Playhouse Caruurta Qalabka Ballan 100 Balls + Shandad
Giraan waa la furi karaa ama waa la xirayaa marka loo baahdo
Farsamaynta soo-dejinta deg deg u dejinta iyo tuubinta, isku-keydinta meel bannaan
Fayadhowrka wanaagsan ee ay ka midka yihiin daaqadaha 5
Jiraan. 100 kubadaha midabka leh
Cabbiraadaha: Ø qiyaastii 105 cm, dhererka qiyaastii 83 cm
Inta badan, teendhadaan cayaaraha waxay ka kooban tahay laba qol oo ku xiran tunnel-ka dharka. Waxaa loo isticmaali karaa dibedda iyo gudaha gudaha wuxuuna keenaa talaabada ciyaaraha, sida Knorrtoys 55200 - magaalada magaalada Zenovia. Haddii tunnel crab-ka ka shaqeeyo, waxaa suurtagal ah in aad si fiican u ciyaari kartid. Teendhooyin leh tuneel badanaa waxay u baahan yihiin meel ka baxsan teendhada carruurta ee sahlan. Waxa ugu fiican ayaa ah in la cabbiro hal ka hor inta aan dooran maqaal.
Waxa la tixgelinayo marka aad iibsaneyso
Dibadda ama gudaha
Mabda 'ahaan, waxaa suurtagal ah in aad isticmaasho teendhooyinka bannaanka. Si kastaba ha noqotee, qaababka qaar ayaa dhisaya nadiifinta. Badanaa, maadadaha polyesteriyadu way yar yahiin waxayna yihiin biyo-celin. Ka dib marka loo isticmaalo dibedda, si fudud ayaa loo nadiifin karaa oo loo isticmaali karaa hoyga qolka carruurta. Dhanka kale, ma aha oo kaliya dukaamada madadaalada, laakiin sidoo kale sicir-barayaashu waxay bixiyaan sariiraha. Duufaan cayaar oo ka samaysan suufku waa qabow yahay xagaaga iyo neefta. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la qaado, sidaas darteedna kuma habboona wadada. Si kastaba ha noqotee, waxay u wanaagsan tahay sida teendhada carruurta loogu talagalay isticmaalka gudaha.
Ciyaar waxaa la dhexgalaa cidhiidhi, taas oo isla mar ahaanta loo adeegsado taageero ahaan. Dukumiintiga caadiga ah waxaa lagu qabtaa afar geesood. Waxay ka kooban tahay dhulka dabaq ah. Waxaa la heli karaa gawaarida wareegsan, salka hoose ee ay ku jiraan hal ama dhowr dabo. Xataa teendhada tareenka waxaa lagu dhisay meelo wareegsan. Faa'iidada teendhadaani waa in ay tahay isafgarad hab fudud oo la raaco. Waxaa suurtogal ah in lagu dhejiyo barkada qubeyska wareega ama teendhada. Sida dallad, lakin Indian Indian ah ayaa loo duubi karaa sidoo kale meel ku taalla geeska.
Nasiib darro, waxsoosaarro badan ma bixiyaan wax macluumaad ah oo ku saabsan sunta. Si kastaba ha noqotee, dhammaan qodobada Sharciga Qalabka cayaaruhu waa inuu waafaqsanaado oo u hoggaansamaa xaddidaadyada ku saabsan xeryaha qashinka lagu dhaqo iyo kuwa suldooyinka looga shakisan yahay inay kobcinayaan dhalmo la'aanta iyo kansarka. Dareen-celinta maqaarka iyo xasaasiyadaha ayaa sababi kara dhaylo adag. Waxaa muhiim ah in aad taxaddar u yeelato calaamadda CE marka aad iibsaneyso. Macallimiin tiro badan ayaa ku andacoonaya in qofku uu urin karo isla markaana soo saari karo wasakheynta waxyeellada leh, laakiin tani macnaheedu maahan. Haddii aad rabto inaad hesho qaali qaali ah oo gaar ah, waa wax aad u macquul ah inaad fiiro gaar ah u siiso soo-saaraha. Haddii aad rabto inaad hubiso in teendhada carruurtu aysan waxyeello u lahayn caafimaadka, waxaad haysataa fursad aad kuugu taxadartid seerkurkan ÖKOTEST. Si aad u xaddidid maqaarka maqalka ee teendhadaada, waxaad hoygaaga ku dhejin kartaa barkimo iyo busteyaal, taasoo ka dhigeysa inay u ciyaaraan si raaxo leh.
Knorrtoys 55607 - teendhada Ciyaarta - "Princess My Little" xayeysiis
Cabbirka qaybta: Ø XUMKA cm, 105 cm sare
Albaabka gelitaanka waxaa lagu hagaajin karaa laba xaraf
laba daaqado oo faashad ah
Xaalado badan, teendhada ciyaarta si sahlan ayaa loo tirtiri karaa maro qoyan iyo qaar ka mid ah saabuunta fudud. Waa suurtogal in la nadiifiyo gudaha teendhada carruurta oo leh nadiifiye qalab gacmeed oo gacmaha lagu tirtiro iyo maro qoyan. Qof kasta oo nadiifiya teendhada suufka waa in marka hore laga saaro dhufaysyada. Teendhaankan waxaa badanaa lagu maydhi karaa gacmo dhaqasho ama jilitaan jilicsan oo ah 30 Grad. Halkan waxaa muhiim ah in la ilaaliyo tilmaamaha daryeelka, kaas oo lagu akhrin karo tilmaamaha. Si looga hortago caaryada iyo urka, waxaa aad u faa'iido leh in mar walba hawo qalajiso oo qalajiyo teendhada ciyaarta. Badanaa teendhadu waxay ku jirtaa bacda qaadista.
Wixii da 'kooxeedyada teendhooyinka carruurta waa ku habboon yihiin
Carruurta 1-sano jir ah horey waxaa loo keeni karaa teendhada ciyaarta iyadoo la kormeerayo ilmo xaq u leh waxbarashada. Guud ahaan, isticmaalka bjørk waxaa lagula talinayaa da'da saddex jirka. Markaad joogtid teendhada, carruurta yaryar waa in la kormeeraa mar kasta oo laga yaabo in ay jirto khatar dhaawac ah sababtoo ah jooniska ama tolidda. Xaqiiqdii ma jiro xadka da'da guud ee isticmaalka meelaha lagu ciyaaro. Ilaa iyo inta dhallinyaradu ku raaxeystaan ​​hoyga, waxba kama hadlaan teendhada. Marka aad iibsaneyso, waxaa muhiim ah in la hubiyo in teendhadu ay ku filan tahay. Iyada oo teendhooyinka aad soo iibsato ee socod baradka, waxay macno samayneysaa haddii mid ka mid ah waalidiinta ay sidoo kale ku habboon tahay teendhada bilowga.
Waxaa suurtagal ah in la iibsado cayaaraha IZZY ee teendhooyinka carruurta ee gudaha iyo dibeddaba. Teendhooyinka waa fududahay in la dhiso oo la burburiyo. Polyester inta badan waxaa loo isticmaalaa alaab. Qalabka cayaaraha ee shirkadani waxay ka kooban tahay caag. Iyadoo ku xiran tusaalaha waxaa suurtagal ah in la kordhiyo sariirta oo leh tunnel play. Taabashooyinkaas waxaa ka mid ah nashqada caruurta iyo qaababka quruxda badan. Si kastaba ha noqotee, dhar maaha mid khafiif ah, sidaas darteedna kuma habboona isugeyn joogto ah iyo burburin.
Teendhooyinka carruurta ee Roba ayaa laga heli karaa qiimaha dhexe. Xaaladdan, waa in la xoojiyaa in qalabka la ciyaaro oo kaliya lagu shaqeynayo teendhad kasta. Teendhooyinkan waxaa lagu calaamadeeyay TUV, laakiin waxaa lagu hubiyaa oo la ilaaliyaa si joogto ah oo ay u sameeyaan hay'ado madax-bannaan. Roba wuxuu soo bandhigayaa gawaaridiisa oo aan laheyn ilmo iyo saaxiibtinimo.
Waxay ahayd sannadihii ugu dambeeyay in maryaha carruurta lagu daro noocyada kala duwan ee Knorrtoys. Teendhooyinka calaamadahan waxay ku yimaadaan saamiga waxtarka qiimaha-kharashka. Xaalad caadi ah, teendhaan cayaar walba wuxuu ka sameysan yahay qalabka synthetic. Waxa kale oo ku habboon isticmaalka banaanka. Waqtigan xaadirka ah, teendhooyinka ayaa loo heli karaa sidii horumarin cusub oo barbaarin leh, taas oo ay rinji ka soo qaadi karaan dadka cusub.
Digniinta: Digniin! Looma ogola carruurta ka hooseysa sanadaha 3. Khatarta cirridka sababo yar yar.
Bixinta: Kaarbo la daabacay
Teendhooyinka carruurta ee HABA waxay ku jiraan fasalka qiimaha sare. Soo saaraha qalabka wax lagu ciyaaro ee Bavarian ayaa ku takhasusay qalabka wax lagu ciyaaro iyo alwaaxyada. Iyada oo teendhooyinka calaamadahaani had iyo jeer naqshadaha iyo qaababka quruxda badan maskaxda ku hay. Sariiraha carruurta ee aadka loo sawiray ayaa waxay ku qancinayaan shaqooyin culus iyo muraayado. Qalab kasta oo ka yimaada soo saaraha ayaa ku haboon isticmaalka banaanka, sababtoo ah muraayadaha isdaba-joogga leh iyo codsiyada kala duwan ma aha kuwo u adkaysta iyo biyaha u adkaysta. Si kastaba ha noqotee, teendhooyinkani waa aragtida ugu wanaagsan ee qolka carruurta.
Laga soo bilaabo My-teepee waa inaad ujirto sariir yar oo qoto dheer u galo boorsada. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, teendhada cayaaraha ee aan halista ahayn ee la damaanad qaadana waa la helayaa. Suurtagalnimada fursadaha hoyga waa suuf, oo aan inta badan laga helin suuqa. Sidoo kale, xadhkaha iyo xargaha oo dhan laguma sameeyo naylon ama qalab kale oo qalin ah, laakiin kuwan waxaa sidoo kale laga sameeyaa dharka miiska ama suufka. On teendhooyinka wax soo saaruhu wuxuu bixiyaa damaanad toban sano ah. Daboolka teendhadu wuxuu qabaa dhuunta Ökotex waxaana lagu nadiifin karaa mishiinka dharka. Intaa waxaa dheer, teendhooyinka loogu talagalay Her-toosinta My-diepee waxay ku dhacdaa naqshad wanaagsan iyo cabbirka ilmaha. Teendhooyinkani waa mid aad u adag oo aan waqti lahayn.
my-teepee ciyaarta teendhooyinka ee loogu talagalay carruurta, Waxaa lagu sameeyay Jarmalka, dammaanadda soo-saareyaasha 10 sano, maaddada wasakhaynta wasakhda ah, ulo ka samaysan alwaax, daboolida 100% suufka, dhererka 150 cm, oo leh daaqad xiran, tilmaame buluug ah
Qalabka dabiiciga ah & oo laga sameeyay Jarmalka: dabool laga sameeyay suuf leh Ökotex 100 seal (oo ay caddeeyeen shirkadeena, mashiinka la dhaqi karo), ulaha alwaax laga sameeyey
Fiidiyowkaan waxaa lagu muujiyay qaab qurux badan sida loo dhejiyo teendhada. Tani ma aha mid sahlan.
Maqaalka xigtasabbaysiinaynaa gacanta